OMC Pressurized lasantsy Fuel fiara mifono vy | Outboard Boat Motor Repair
OMC Pressurized lasantsy Fuel fiara mifono vy
Tsindrio eto raha hividy eBay ho an'ny Evinrude/ Johnson Dual Fuel Lines sy Tanks
Fampitandremana About Pressurized lasantsy Fuel fiara mifono vy nampiasaina tamin'ny Motors OMC Tranainy
Ireo motera ireo dia mampiasa fiara mifono solika voatsindry, fantatra amin'ny anarana hoe Cruis-a-Day Tanks. Raha tokony hitsentsitra solika avy ao anaty tanky, ny fantsom-pifandraisana roa dia manapoka ny rivotra ao anaty tanky, manery azy io ho 4-7 PSI izay manery ny solika hiverina amin'ny motera. Amin'ny ankapobeny, ireo fiara mifono vy voahidy ireo dia ahiana mampidi-doza na loza mitatao. Ny OMC dia nijanona tsy nampiasa ireo fiara mifono vy ireo intsony taorian'ny 1959 ..
Azonao atao ny milaza raha manana ny iray amin'ireo fiara mifono vy ireo ianao satria hanana roa ny tsipika, ny iray hantsaka rivotra ao anaty fitoeran-tsolika, ary ny iray hafa handefa solika amin'ny motera. Ity karazana tank ity no tanky solika ivelany voalohany nivoahan'ny OMC ary teknolojia vaovao tamin'ny androny. Raha vantany vao hita ny olana dia nivadika ho any amin'ny rafitra fitrohana solika tsipika iray ireo mpanamboatra motera sambo izay azo antoka kokoa.
Olana amin'ny Pressurized Fuel fiara mifono vy:
Lasantsy sy ny zavona eo ambany tsindry Gas dia tsy hafa fa baomba!
Sarotra ny manisy tombo-kase ireny tanky ireny na dia vaovao aza. Raha tafaporitsaka ireo fiara mifono vy, dia hitsoaka ao anaty sambonao sy amin'ny rivotra ny entona sy solika.
Mitete fiara mifono vy very ilaina ihany koa ny fanerena mba hanolotra solika ny ela Hose indray ny maotera.
Raha manana varingarina misy valiny ianao, dia mety hitsika ireo (motera) ao anaty ny sakana ary manery ny tsindry hidina ao anaty fitoeran-tsolika. Fantatra izany ka nahatonga ny satroka hitsoka ny fisaorana ary hitifitra 20 metatra ho eny amin'ny rivotra! Ity sneeze ity dia mety handrehitra ny fitoeran-tsolikao koa. Fantatra koa izany ka nahatonga ny fantson-tsolika vaky.
Raha toa ianao ka avy ao amin'ny rano sy ny tanky tsy mahavita hanao fanerena, ny hany fomba mihazakazaka ny maotera dia ny mihazona ny tanky ho ambonin'ny haavon'ny ny carburetor ary aoka solika sinton'ny fahana ny maotera.
Tsy mora ampiasaina ireo fiara mifono vy ireo. Mila manindry ny tanky amin'ny paompy tanana ianao alohan'ny ahafahanao manomboka ny motera anao. Ianao koa dia mila mandreraka ny tanky alohan'ny hanalana ny satrony.
Raha manana iray amin'ireo fiara mifono setroka taloha ianao dia mety hisy ny fikojakojana azy mba hiasa tsara. Misy kit ho fanamboarana ireo gasket sy tombo-kase amin'ireo tanky ireo izay mbola azo vidiana ankehitriny. Mila mandray fanapahan-kevitra ianao na hanamboatra ny tanky misy anao na hiova amin'ny karazana paompin-tsolika sy ny tsipika ampiasain'ny OMC ankehitriny.
Milaza ny paika manaraka ny fomba ny maotera amin'ny solika mahazatra kokoa paompy, fitsipika, ary ny fitoeran-tsoliky izay ho azo antoka kokoa sy azo antoka kokoa.
Mamelombelona avy roa-dalana, pejy Pressure Tank System ho Single-dalana, pejy Fuel Pump Suction Tank System
Ny fomba fanaovana an'io fiovam-po io dia tsotra ihany, indrindra raha efa nesorinao ny carburetor ho anao. Ireo fitaovana ilainao dia misy ireto manaraka ireto:
Tokony ho 6 tongotry ny vacuum tsipika Hose, misy na oviana na fivarotana fiara faritra.
3 na 4 Zip Ties
Single-dalana, Fuel Connector
Single-dalana, Gas Tank sy Hose
Mikumi dia orinasa japoney efa an-taonany maro nanao carburatera sy paompy solika. Hahita be dia be ny paompin-tsolik'izy ireo ampiasaina amin'ny go-carts, fiaramanidina ultra-light, ary fampiharana maro hafa izay misy maotera kely. Ity paompy solika ity dia hita amin'ny fivarotana go-cart rehetra. Novidiko an-tserasera ity iray ity teo amin'ny $ 22.00. Ny ankamaroan'ny paompy solika ho an'ny motera kely Evinrude sy Johnson dia miakatra mivantana amin'ny crankcase. Raha ity moto HP 5.5 ity dia tsy misy toerana hametrahana ny paompy solika. Ny motera lehibe kokoa toa ny 7.5, 10, na 18 HP con dia misy paompy solika OMC nampiana.
Mikumi Pulse mampandeha Fuel Pump
Ity paompin-tsolika ity dia miasa amin'ny pulse vacuum izay azo avy amin'ny motera. Ity banga ity dia ateraky ny motera ary aterina amin'ny paompy amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana mifamatotra amin'ny mpampitohy afovoany amin'ny paompy. Ny mpampifandray roa hafa dia ho an'ny tsipika mankamin'ny tobin-tsolika na mpampifandray solika (zana-tsipìka manondro) ary mankany amin'ilay tsipika mankao amin'ny carburetor (zana-tsipika manondro).
Esory ilay Carburetor KITIHO ETO. ny mahita toromarika amin'ny fanesorana ny carburetor.
Raha esorinao ny fonony misimisy mihinana, miorina ao ambadiky ny carburetor, dia hahita lavaka roa misy fehikibo vita amin'ny fingotra eo amboninao ianao. Ny valizy dia valizy fanamarinana izay rivotra hitsangatsangana ivelany avy amin'ny crankcase. Izy io dia miteraka tsindry an-drivotra tsara handehanana amin'ny iray amin'ireo tsipika amin'ny tsipika solika roa hanerena ny tanky. Esory ny visy roa mitazona ny lohataona ary jereo ny valve. Ny iray amin'ireto lavaka ireto dia mankany amin'ny efi-tranofiara tsirairay amin'ny môtô tsingerinay roa.
Mba hahazoana fantsom-panafody, ampidiro ny iray amin'ireo lavaka ireo amin'ny tendron'ny plug-n'ny fantsona. Karakarao ny halavan'ny tsipika tsivalana mba hitazomana ilay fonosana manifold fihinana mba tsy ho diso toerana. Soloy ny fonony misimisy mihinana.
Soloy ny mpampitohy tsipika solika taloha amin'ny mpampitohy solika tsipika tokana vaovao. Afaka nahazo mpampitohy solika andalana tokana aho teo amin'ny tokotanin'ny sambo teo an-toerana manodidina ny $ 6.00 fa misy ihany koa izy ireo avy amin'ireo mpivarotra OMC. Ity sary eto ambany ity dia afaka mahita ireo mpampifandray solika taloha sy vaovao. Ny mpampitohy vaovao (eo ankavia) dia misy prong roa ihany. Apetaho amin'ny tsipika fampifangaroana roa metatra eo amin'ny takelaka fisoratampanana.
Esory ireo tsipika taloha roa mamakivaky ny tanin'ny mpitrandraka mankany amin'ny mpampitohy ny solika ary soloina tsipika tokana izay handeha avy amin'ny mpampitohy solika mankany amin'ny paompy solika vaovao. Avelao ny tsipika tokony ho 2 metatra handehanana manodidina mankany amin'ny paompy solika.
Avereno ilay mpanenona KITIHO ETO. hahita torolàlana amin'ny fametrahana ny carburetor. Apetaho eo amin'ny carburetor ny tsipika tsy misy fangarony 2 metatra hampidirina amin'ny paompy solika.
Alaharo ny tsipika fantsom-bitsika ataonao, ny tsipika karburator, ary ny tsipika mpampitohy solika manodidina ny paompy solika izay apetrako ao ambadiky ny feon-tsolika mandre ny manaraka ny crankcase. Hetezo ny halavany mihoatra ny endriny ary ampifandraiso amin'ny paompy solika. Rehefa mamily ireo andalana ireo ianao dia tazomy ho lavitra amin'ireo faritra mihetsiketsika na rohy mifandraika. Ny omby dia tokony hifanaraka amin'ny paompy solika vaovao fotsiny. Mampiasà fatorana zip mba hiarovana ireo andalana mba hijanonany eo amin'ny toerany.
Ny maotera izao niova fo ary ianareo dia vonona ny hampiasa ny vaovao mandatsa-dranomaso sy ny solika tanky tsipika.